အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ရေအပူပေးစက်, လူနေထိုင်ရာအပူ Pump ရေအပူပေးစက်ထုတ်လုပ်သူခုနှစ်တွင်တစ်ခုမှာအပူ Pump, ခုနှစ်တွင်တရုတ်အားလုံး
Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Other Markets , West Europe ထုတ်ကုန်:91% - 100% Cert:ISO9001, CB, CCC, CE, EMC, SSA ဖေါ်ပြချက်:အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင်,အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ရေအပူပေးစက်များတွင်,လူနေအိမ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက်,Eco အပူ Pump,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင်
အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင်, အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ရေအပူပေးစက်များတွင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လူနေအိမ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Air Source အပူပေးစက်ရေဘွိုင်လာ
Energy Heat Pump ရေအပူပေးစက်တစ်ခုလုံး
ပြင်ပရေခဲသေတ္တာကွိုင် Monobloc Air Source Heat Pump
တစ်ခုတည်းသောအပူ pump တွင်အဝေးထိန်း
အားလုံးသော One Heat Pump 400L တွင်လေအရင်းအမြစ်
300L အားလုံးတစ်ခုမှာအပူ Pump ရေအပူပေးစက်
တစ်ခုမှာအပူစုပ်စက်အားလုံး Air ကိုအရင်းအမြစ်
အားလုံးတ ဦး တည်းလေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်ထဲမှာ
အားလုံးတ ဦး တည်းအတွက်အပူစုပ်
2019 လက်ငင်းစွမ်းအင်ချွေတာအပူ pump pump
သောမတ်စ် trane အားလုံးတ ဦး တည်းအပူစုပ်စက်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ SS304 အဖုံးနှင့်ရေတိုင်ကီ၊ ကြာရှည်ခံ။ သံချေးမခံစေရန်။ အချင်း ၆၀၀ ရှိသော 400L အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ပိုကြီးသောပမာဏ။ ၃။ လူနေအိမ်ရာအပူရေစုပ်စက်တည်ငြိမ်သောရေစီးဆင်းမှု၊ ရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲခြားခြင်း၊ ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အတူအပူပေးစက်။ အဘယ်သူမျှမ refrige ra NT...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ GMCC rotary type နာမည်ကြီးသောတွန်းစက်၊ တုန်ခါမှုနည်းခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း။ ၂. လူနေအိမ်အပူစုပ်စက်ရေအပူပေးစက် ၅၅ to အထိအပူပေးရေ။ ၃။ ရေစုပ်စက်တစ်လုံးပါသောအပူစုပ်စက်တစ်လုံး၊ ၄။ အပူရေစုပ်စက်တစ်ခုတွင်အားလုံးသည် touch screen အသိဉာဏ်ရှိသောထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး၊...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ GMCC rotary type နာမည်ကြီးသောတွန်းစက်၊ တုန်ခါမှု၊ ဆူညံသံနည်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှုန်းမြင့်သည်။ ၂. လူနေအိမ်အပူစုပ်စက်ရေအပူပေးစက် ၅၅ to ထိအပူပေးရေ။ ၃။ ရေစုပ်စက်တစ်လုံးတည်းရှိသောအပူစုပ်စက်တစ်ခုတွင်၊ ၄။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ တင့်ကားအတွင်းရှိကြေးနီကွိုင်ထဲနှစ်မြှုပ်ခြင်းတွင်အပူစုပ်စက်တစ်ခုရှိရေအပူပေးစက်။ ၂။ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှု - အားလုံးသောအပူစုပ်စက်တစ်ခု၏ဒီဇိုင်း၊ plug and play ။ ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူ 3. အသိဉာဏ်။ ရေအပူစုပ်စက်အမှားကုဒ်ပြသသည့်အခါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လွယ်ကူသောပြproblemနာရှိခြင်း။ ၄။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. လေပူအပူစုပ်စက်သည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိသည် အစားအစာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ dehumidifier များစသဖြင့် သိုလှောင်ထားသည့်မြေအောက်ခန်း တွင် အသုံးပြုသည် ။ ၂။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအိမ်သုံးအပူစုပ်စက်ရေအပူပေးစက်သည်ရေပူသို့မဟုတ်အိမ်အသုံးအဆောင်အတွက်အပူပေးသည်။ ၃။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. တပ်ဆင်ခြင်းအစောပိုင်းကအများကြီး, အအေးပိုက်ဆက်သွယ်မှုမျှ - ရေ fittings နှင့်ပါဝါ cable ကို။ မဆိုရေပိုက်သမားကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၂ ။ ဒါဟာလျှပ်စစ်ဒြပ်စင်ထက်လည်ပတ်မှုအများကြီးစျေးသက်သာပါတယ်။ ၃။ နေရာချွေတာခြင်း၊ နေရာလွတ်နည်းခြင်း၊ ရေတိုင်ကီသည်အဓိကယူနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ လူနေအိမ်အပူ pump...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ Reverse cycle defrost အရည်အသွေးမြင့်မားသောလေးလမ်းသွားအဆို့ရှင်၊ အလိုအလျောက်ရေခဲဖျက် function ကိုပါဝင်သည်။ ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူ 2. အသိဉာဏ်။ ရေအပူစုပ်စက်အမှားကုဒ်ပြသသည့်အခါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လွယ်ကူသောပြproblemနာရှိခြင်း။ ၃။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ အပူစုပ်စက်တစ်ခုအတွင်းရှိအားလုံးသည်အတွင်းအကြံပေးပုဒ်၏အပြင်ဘက်ရှိကြေးနီ condensing ကွိုင်များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှဝေးလံခေါင်သီ Controller နှင့်အတူ quickmind မိုက်ခရိုအားဖြင့် 2. အသိဉာဏ် controller ကိုနှင့်ချိန်ညှိ ။ ၃။ လေပူအပူပေးစက်ယူနစ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်း controller နှင့် PCB၊...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ အပူစုပ်စက်တစ်ခုလုံးတွင်တည်ဆောက်ထားသောမြင့်မားသောအပူချိန်အတွက်နှစ်ဆလုံခြုံမှုတိုင်းတာခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအသုံးပြုရန်။ 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် 90 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏ Overload ကာကွယ်မှုနှင့်အတူဘယ်။ se Protect လေထုအပူစုပ်စက်အရည်ပျော် lf- ။ 2....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ အပူစုပ်စက်တစ်ခုလုံးတွင်တည်ဆောက်ထားသောမြင့်မားသောအပူချိန်အတွက်နှစ်ဆလုံခြုံမှုတိုင်းတာခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်။ 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် 90 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏ Overload ကာကွယ်မှုနှင့်အတူဘယ်။ se လေထုအပူစုပ်စက်ကာကွယ်ပေးအရည်ပျော် lf- ။ 2....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. အငွေ့ပျံသည်၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုအပူစုပ်စက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပုံမှန်ထက်အရွယ်အစားထက်ပိုကြီးတဲ့။ 2. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေဖိအား 0.6Mpa ရောက်ရှိ။ ၃။ Excellent 304 # သို့မဟုတ် 316L သံမဏိဖိအားရှိသောရေတိုင်ကီရေအပူပေးစက်။ ၄။ အလိုအလျောက်အပြည့်အဝဖွင့ ်၍ တပ်ဆင်ထားသောအပူချိန်လေအပူစုပ်စက်ဖြင့်ရပ်သည်။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. အငွေ့ပျံသည်၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုအပူစုပ်စက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပုံမှန်ထက်အရွယ်အစားထက်ပိုကြီးတဲ့။ 2. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေဖိအား 0.6Mpa ရောက်ရှိ။ ၃။ Excellent 304 # သို့မဟုတ် 316L သံမဏိဖိအားရှိသောရေတိုင်ကီရေအပူပေးစက်။ 4. အပြည့်အဝအလိုအလျောက် start up နှင့် setup...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ Eco အပူစုပ်စက်၏အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်သည်ပြင်ပလေထုအပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပိုပြီးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် conveience ။ ၂။ လေပူအပူစုပ်စက်သည်အမျိုးမျိုးသောကာကွယ်မှုများရှိသည်။ အနိမ့်ဖိအား ကာကွယ်, အပူကျော်ကာကွယ်, overload ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နှင့်။ ၃။ အပူပေးစက်တစ်လုံးထဲ၌အားလုံးသည်အမြင့်ဆုံး 60c...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ Eco အပူစုပ်စက်၏အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်သည်ပြင်ပလေထုအပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပိုပြီးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် conveience ။ ၂။ လေအပူစုပ်စက်သည်အမျိုးမျိုးသောကာကွယ်မှုများရှိသည်။ အနိမ့်ဖိအား ကာကွယ်, အပူကျော်ကာကွယ်, overload ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နှင့်။ ၃။ အပူပေးစက်တစ်လုံးထဲ၌အားလုံးသည်အမြင့်ဆုံး 60c...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ ပေါင်းစပ်ထားသောဒီဇိုင်း - အားလုံးသည်အပူစုပ်စက်တစ်လုံးတည်းတွင်အထူးသဖြင့်မိသားစုအသုံးပြုရန်အတွက်သန့်ရှင်းသောရေပူများကိုပေးသည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုလုံးနှင့်ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်အိမ်တွင်းတပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သည် ၂။ ဂေဟဗေဒနှင့်စီးပွားရေးအပူပေး - Eco...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ တင့်ကားအတွင်းရှိကြေးနီကွိုင်ထဲနှစ်မြှုပ်ခြင်းတွင်အပူပေးစက်တစ်ခုရှိရေအပူပေးစက်။ ၂။ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှု - အပူပေးစက်တစ်ခုလုံးတွင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်း။ ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူ 3. အသိဉာဏ်။ ရေအပူစုပ်စက်အမှားကုဒ်ပြသသည့်အခါ...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ Eco heat pump, မြင့်မားသော cop သည် ဂျပန်၏ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်သည့် compressor ကိုအသုံးပြုသည် အမှတ်တံဆိပ် compressor နှင့် tank ၏အပြင်ဘက်တွင်ရေခဲသေတ္တာကွိုင်ထုပ်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်း။ ၂။ ရေစုပ်စက်တစ်ခုတွင်ရေအပူချိန်ပြသသည်။ ရေခဲသံသရာ 3. အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု။ 4....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ လေပူစုပ်စက်နှစ်ဆရေဆက်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ၂။ ဆူညံမှုနိမ့်သောအပူစုပ်စက်၊ အရည်အသွေးမြင့်ပန်ကာကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာလည်ပတ်ခြင်း။ ၃။ ကြာရှည်ခံသည့် antirust stainless steel cabinet design, dopt hi-tech double wall tubing heat exchanger...
တရုတ်နိုင်ငံ အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင် ပေးသွင်း
1. အစိမ်းရောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး, လျှပ်စစ်မီးနှင့်ငွေချွေတာ။
2. ဒါဟာလျော့နည်းအာကာသကိုတက်ယူပြီး install လုပ်ရန်မလွယ်ကူသောဘက်ပေါင်းစုံအဓိကအင်ဂျင်ဒီဇိုင်းနှင့်ရေတိုင်ကီ, မွေးစားရန်လှပရက်ရက်ရောရောဖြစ်ပါတယ်။
3.100L-400L 2-8 လူတို့အဘို့သုံးနိုင်တယ်။
4. ပြင် / အတွင်းစိတ်ကွိုင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေအပူပေးစက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်အပိုဆောင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကွိုင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
5.1-2KW လျှပ်စစ်အပူပေးပိုတည်ငြိမ်အပူထောက်ပံ့ရေးသေချာစေရန် backup လုပ်ထားအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
6. စားနပ်ရိက္ခာတန်းအကြံပေးအဖွဲ့ကှနျ့, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်စင် Insight web studio ၏အခမဲ့ collocation (ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, optional ကိုစတိုင်လ်), သံမဏိ, အရောင်စာရွက်သတ္တု။
အကြံပေးအဖွဲ့ shell ကို၏ 7. ပစ္စည်းကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။ မဂ္ဂနီစီယမ်လှံတံ calcification နှင့်အကြေးကာကွယ်တားဆီးဖို့ရေတိုင်ကီက built-in နိုင်ပါသည်။
8. မက်စ်ရေပူ 60 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ရေကောင်းရေသန့်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ပုံမှန်အပတ်စဉ်မြင့်မားသောအပူချိန်ပိုးသန့်ဆေး။
9. အကွိမျမြားစှာ Self-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာ။
10. ကမ္ဘာကျော် Compressor သုံးပါ။
အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ရေအပူပေးစက်များတွင်
လူနေအိမ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက်
Eco အပူ Pump
အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump စနစ်အတွက်
အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင် အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ရေအပူပေးစက်များတွင် လူနေအိမ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် Eco အပူ Pump အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump စနစ်အတွက်